မျိုးချစ်စိတ်ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါအကြောင်း သင် သိပါသလား? ~ Myanmar Express
မျိုးချစ်စိတ်ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါအကြောင်း သင် သိပါသလား?
From : ဘထွေး
ယနေ့မျက်မှောက် ၂၁ ရာစုတွင် အတွင်းလှိုက်စား အဖြစ်များဆုံးရောဂါဟာအဲဒီ့ရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတော်တော်များများဟာ .. အခုအချိန်မှာထိုရောဂါ ကူးစက်ခံနေရပြီး အမြစ်ကနေ တိုက်စားခံနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မြန်ပျောက်အောင် မကုသနိုင်ပါက .. တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး လူမျိုးပြုတ်၊ဘာသာ သာသနာပါပြုတ်မည့် ရောဂါစစ်စစ်ပါပဲ ..။
ဒံပေါက်မစားရလို့ သေတဲ့မသာ မရှိပါဘူး။ စားလို့ သွေးတိုးပြီး သေတဲ့မသာပဲ ရှိရင်ရှိမှာပါ။ တခြားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ပြောစရာတွေ အများကြီးပါပဲ။ အမေရိကန်ဗေးရှင်းက ကုလားတွေ အိုင်ကျူဗေးရှင်းက ကုလားတွေ ဆီမှာမှ မျက်မှန်လုပ်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ကြည့်လိုက်တိုင်း
လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှကို ကုလားတွေ တရုတ်တွေက လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး မြန်မာတွေက သူတို့ဆီက အခစားအလုပ်သမားတွေအဖြစ် မြင်နေရတာက နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီ့ရောဂါရဲ့ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ နှုန်းထားကို အဲဒီ့ပြဿနာတွေကြည့်ပြီး တိုင်းထွာနိုင်ပါတယ်။
နာတတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်နာစရာကောင်းလဲဆိုတာ .. ကုလားတွေကိုကြည့်ပါ ..။ သူတို့ဘယ်တော့မှ သူတို့လူမျိုးဆိုင်မဟုတ်ရင် အားမပေးဘူး။မစားတတ်ကြဘူး။ မြန်မာတွေကတော့ ကွမ်းတယာ ရေတမှုတ်ကအစ ဘယ်သူရောင်းရောင်း စားတတ်ကြတယ်။ ဆရာပီမိုးနင်းရေးခဲ့ဖူးတဲ့ သိသူဖော်စားမသိသူကျော်သွား ..တို့လို စာအုပ်မျိုးတွေမှာ မြန်မာတွေ အလုပ်များများလုပ်ဖို့၊ တရုတ်ကုလား အားမကိုးဖို့ကို ကျပ်ကျပ် သွန်သင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆောင်းတွင်းမက်တဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုလောက်တောင် အရေးတယူမရှိဘဲ၊ ပေါပေါပဲပဲ သဘောထားပြီး ပိုနေမြဲကျားနေမြဲ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားကို အားပေးခဲ့လို့ ဒီနေ့မှာ ဒီလိုလူပါးဝ ခံလာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာကြီး ဦးဖိုးကျား၊ ဆရာဇော်ဂျီ၊ ဆရာ ပီမိုးနင်း၊ ဆရာ မောင်ထင်တို့လိုဆရာကြီးတွေဟာ .. အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့ .. ဘာသာခြားလူမျိုးခြားတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက တားဆီးခဲ့ကြပေမဲ့၊ အပျော်ဖတ်ဝတ္တုတစ်အုပ်၊ ကာရာအိုကေ
သီချင်း တစ်ပုဒ်၊ ဇီးထုပ် တစ်ထုပ်လောက်တောင် အရေးယူခဲ့သူတွေ နည်းပါးခဲ့တာကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားကို ကုလားထင်လို့ .. မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာဟာ အနှစ်သာရမပြောင်းသွားပေမဲ့၊ ကုလားကို ဘုရားထင်ရင်တော့ ရိုးတွင်းခြင်ဆီပါမကျန် သွေးစုပ်ခြယ်လှယ်ခံရတော့မဲ့ ဘေးကို ကြိုပြီးတွေးသင့်ကြပါတယ်။
ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတာက မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာ .. ကုလားကို ပါးစပ်က ရွံမုန်းတယ်ဆိုပေမဲ့ .. လူရောစိတ်ပါ ရွံမုန်းတာ ဟုတ်ပါ့မလားဆိုတာ .. MC AdulZaw Win ဆိုတဲ့ ကုလားရဲ့ လူပါးဝလှတဲ့ အရေးအသားနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို မြင်တာနဲ့ သိလောက်ပါတယ်။ ဘ၀ပေးမကောင်းလို့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်စားခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးချင်း လိုက်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ဘာလာလာ ဒေါင်းတဲ့ ပြည့်တန်ဆာ .. အဆင့်ချင်း လုံးဝမတူဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ (စကားရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်)။ နောက်ဆုံးတော့ ပြည့်တန်ဆာပဲ ငွေရလို့လိုက်တာ ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီး ဆင်ခြေကန်မယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြည့်တန်ဆာမဟုတ်ဘဲ ကုလားကို ယူတဲ့ မြန်မာစင်စစ်က ခေါင်းမြီးခြုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မျိုးဖျက်မ အောက်တန်းစားတွေကတော့ ခုနက ပြည့်တန်ဆာတွေထက်တောင် ယုတ်ညံ့လှတယ်လို့ ယူဆရပါမယ်။ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ အိမ်ထောင်
သားမွေးမှုဟာ မဆန်းကြယ်ပေမဲ့၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မျိုးရိုးစဉ်လာတစ်ခုရဲ့ပေတံနဲ့ တိုင်းထွာမယ်ဆိုရင်တော့ အလွန်ကို ကြီးလေးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဖြေရာ ခံစားမှုတစ်ခုဟာ .. လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်
ဆိုတာ ..တွေးသင့်ပါတယ်။ ကုလားနဲ့ အိပ်လိုက်လို့ ရတဲ့ ကာမဂုဏ်ခံစားမှုကို သင်နေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့ လဲဖို့ သတ္တိတွေရှိနေတယ်ဆို .. သင့်အိမ်က ဘုရားစင်ကို တစ်ချက်လောက် သတိရပါ။ ခေါင်းမြီးခြုံဘ၀ထက် ပါးကွက်ကျားနဲ့ ရင်ဖုံးအကျီင်္က သင့်ဘ၀ကို ပိုလုံခြုံအေးချမ်းစေတယ်ဆိုတာ
သတိရပါ။ ကုလားတစ်ကောင်အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ဟာ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် သစ္စာထားခံရမဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေး တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်အရ တဏှာဦးစားပေး ကုလားတွေဟာ တစ်နေ့နေ့မှာ သင့်ကို ကလေးများများမွေးဖို့အတွက်မျိုးပွားယန္တရားတစ်ခုအဖြစ်ထားပြီး နောက်ထပ် မျိုးပွားယန္တရားတွေကိုလည်းထပ်ပြီး ရှာဖွေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူစင်စစ်က ခွေးဖြစ်ရတဲ့ ဘ၀လို ဆက်စ်ပါတနာ များစွာနဲ့ အဖျော်ဖြေခံဘ၀တစ်ခုမှာ ကျေနပ်မှုမပြုသင့်ဘူးဆိုတာအမြဲတမ်း သတိထားပါ။
ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါဟာ .. မတော်တဆ ထိခိုက်မှုကနေလည်းအဆင်မသင့်ရင် ၀င်လာပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကုရာနတ္တိဘ၀နဲ့ သေဆုံးရသလို၊မျိုးချစ်စိတ် ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါရဲ့ အစဟာလည်း ..ကုလားဆီ ကွမ်းဝယ်စားတာလောက်နဲ့တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ကုလားရောင်းတဲ့ ဒံပေါက်တစ်ပွဲ စားတာနဲ့တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ..လို့ ထင်တဲ့ အထင်တွေကနေ ကိုယ့်ရဲ့ငွေတစ်ရာတစ်နှစ်ရာက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို ပြန်ဝယ်ခံရဖို့ ထောက်ပံ့ကြေး
တွေ ဖြစ်လာ၊ ကိုယ်သေဆုံးရဖို့ ပိုးမွေးနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆို
တာ .. တွေးကြစေချင်ပါတယ်။
ဟာ ..ေ-ာက်ပိုတွေပါကွာ ..လို့၊ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ တွေးချင်တွေးပါ။ဒါပေမယ့် ထိုအတွေးကို သင့်အိမ်ကို ကုလားမီးတင်ရှို့လာတဲ့အခါ၊ သင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် သင့်အမေ နှမ အဒေါ်များအား ..ကုလားက မုဒိန်းကျင့် လည်လှီး ပစ္စည်းလုတဲ့အခါ၊ ထို ..အတိုင်း ဆက်တွေးနိုင်မလား စဉ်းစားပါ။
ဒါမှမဟုတ် .. မျိုးချစ်စိတ်ခုခံအား ကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါကို သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ အကူးဆက်မခံရလေအောင် ကာကွယ်မလားတွေးပါ။
ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီး နစ်သွားဖို့၊ အပေါက် တစ်ပေါက်ကနေလည်း နစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အမှိုက်တစကလည်း တစ်မြို့လုံး ပြာကျနိုင်ပါတယ်။ မြင်ရတဲ့ တုတ်ဓားလက်နက်နဲ့ ထိုးခုတ် တိုက်ခိုက်လာခြင်းကိုလည်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရ ကာကွယ်ပါ။ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ သွေးသားနှီးနှောမှုကနေ တိုက်ခိုက်လာခြင်းကိုလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်
ရာအရ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခုခံပါ။ မ၀င်အောင် တားဆီးပါ။သင်ဟာ ..မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်စစ်စစ်ဖြစ်ရင် .. ဆိုက်ကားပဲနင်းနင်း၊ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် .. ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အကြော်သည်ပဲဖြစ်
ဖြစ် ... သင့်တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်၊ သင့်ဘာသာ သာသနာရဲ့ အနာဂတ်ဟာ
သင့်လက်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ... အမြဲ သတိရပါ။
16 June 2012 11:37
အ မေ စု ကို ဘဲ ဘာလို့ ဝိုင်း ပြော နေ ကြ တာ လဲမ လိ မ္မာ လို့ တ ခါဘဲ ဘ ဝ နဲ့ ရင်း ပြီး မိုက် မိ တာ ကိုအခု အဲ့ ဒီ အပြစ် တွေ ကျေ အောင် မြန် မာ ပြည် ကိုကု လား ပြည် ဖြစ် အောင် လုပ် ပေး မ လို့ ကို
This Author is right. To prevent Islamization ( host country to become Muslim country ) , All World governments must (1)Ban all Muslim immigrants legally or illegally . Deport all muslims to Bangladesh who don’ have Myanmar citizen ID card.(2) Ban building of new mosque ( because Muslim and Islamic countries don’t permit to build Christian church , Buddhist Pagoda, Temple and Monastery and Hindu Temple , Jew Temple but they build million mosques in other religious countries . Muslims are selfish ). Ban Muslim marriage to other religious Myanmars , non religious Myanmar . Ban other religious Myanmar and non religious Myanmar marry to Muslims also . Reward anyone who inform authority that muslim married to non muslim . (3)Government must issue Islam Control law that One Muslim man marry one muslim girl only ( not4Muslim girls ) and one child policy for Muslim couple. Government must jail Muslim couple for 10 years if muslim couple have2children (2kids ) . If Muslims don’t abide the law , must deport them to muslim countries. Reward anyone who inform authority that One muslim couple has more than 1 muslim kid or one muslim has4wives .(4)Ban Sharia law ( Islamic Taliban law ,Muslim Taliban laws ) (5)Ban other religious people and no religious people convert to Muslim and Islam.(6)Protest and prison and fine for all corrupt Myanmar government officers , Politicians , Political Party and Immigration Minister and immigration officers in Myanmar Bangladesh border who support Muslims immigrants , to build mosque , marriage to muslims and convert to muslims.
16 June 2012 15:00
ဒီ postနဲ့ အပေါ်ကEnglish လိုComment ကိုလုံးဝထောက်ခံပါတယ်။အရမ်းကောင်းပါတယ်
16 June 2012 16:39
ကျွန် မ ကတော့ ကုလား ပဲဖြစ်ဖြစ် အဖြူကောင် ပဲဖြစ်ဖြစ် လင်တော်ရ ရင် ပြီး တာ ပဲ
16 June 2012 20:20
I absolutely agree with upper comments and let's apply them to our country by election to those acts. I vote it completely.
15 November 2012 15:40
ဘာ ဖြစ် ဖြစ် ကွာ ဆိုက် တွေ မ ပိတ် ရင် ပြီး ရော
အား လုံး တော် တော့
15 November 2012 16:03
ဘာ တွေ ပြော နေ ကြ တာ လဲ
12 January 2013 23:22
တော် တန် တိတ်ဒါပဲ
NLD ခေါင်းဆောင် တရားဦးပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌဖြစ်နေချိန် NLD ကိုခြေစုံကန်ခဲ့သည့် ဒေါ်နော်အုံးလှနှင့်အဖွဲ့ အား အရေးယူ
NLD ခေါင်းဆောင် တရားဦးပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဥက္ကဌဖြစ်နေချိန် NLD ကိုခြေစုံကန်ခဲ့သည့် ဒေါ်နော်အုံးလှနှင့်အဖွဲ့ အား အရေးယူလိုက်ကြောင်း သတ...
မြန်မာတို့သွေး မျိုးစစ်ရေး အပျိုစင်များအတွက် အထူးမှာထားချက်
မြန်မာပီသ အပျိုစင် ချစ်ဖော်ရွေးချင်ရင်
ဘာသာမျိုးတူ မကွဲပြား ချစ်ဖော်ရွေးပါ့လာ
ကိုယ့်ရင်သွေးမှာ ဇာတိသွေး မြန်မာစစ...